हेटौँडामा एमालेको अग्रता कायमै Global TV Nepal
हेटौँडामा एमालेको अग्रता कायमै
ग्लोवल टि.भी. शनिबार, बैशाख ३१, २०७९ 0
वैशख ३१-हेटौँडा उपमहानगरमा नेकपा एमालेले अग्रता कायमै राखेको छ । एमालेबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहेका अनन्त पौडेलले ७१ मत ल्याउँदा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीनाकुमारी लामाले ६५ मत ल्याएकी छन् ।
उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुमित्रा काफ्ले ८२ मत ल्याउँदा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार राजेश बानियाँले ८८ मत ल्याएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा ३ हजार २ सय ९२ मत खसेको छ । हाल २ सय मत गनिएको छ ।
२ बजिसक्दा पनि बैठक किन सुरु भएन ?
धादिङमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, तेह्र घाइते
यस्तो थियो केपी ओलीको चुनावी भाषण
थप ५ सय ३४ जनामा कोरोना पुष्टि